Ọzara nke uwa: njirimara na onodu gburugburu ebe obibi | Netwọk Mgbasa Ozi
Ọzara nke ụwa
Enwere ọtụtụ ụdị ọzara n'ụwa. Ha bụ ihe ndị dị ndụ na mbara ala nke na-enweta ntakịrị mmiri ozuzo na mmiri kasị ukwuu nke radieshon anyanwụ n'afọ nile. Imirikiti n'ime ha nwere oke okpomọkụ, na ụfọdụ na-eru ogo 60 na ọkwa ala n'oge elekere anyanwụ. Otú ọ dị, ọ bụghị ihe niile ọzara nke ụwa nwee nnukwu okpomọkụ. E nwekwara ndị nke obere okpomọkụ na-ebu ụzọ.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị njirimara niile nke ala ịkpa nke ụwa.
1 Njirimara nke ọzara
2 Dị na usoro ohia nke ụwa
3 Ọnọdụ n'ọzara ụwa
Njirimara nke ọzara
Ọnọdụ ndị a nke biomes Ọ dị n'etiti 15 na 35 ogo latitude na n'akụkụ abụọ. N'ime mpaghara ndị a, anyị na - ahụ ikuku ikuku na - ewepụta oke mmiri na gburugburu. Imirikiti ala ịkpa nke ụwa na-enwekarị mmiri ozuzo. Uzo ndị a bụ ndị achọtara ugwu dị elu. Mgbe ikuku ikuku na-arịgo ugwu, ọ na-ajụ oyi ma mmiri ahụ na-ejupụta, na-amịpụta mmiri ozuzo n'ụdị mmiri ozuzo. Nsogbu bụ na mmiri ozuzo na-ebute ugwu ahụ n'onwe ya ma ọ dị nro na akụkụ nke ọzọ nke mkpọda ahụ nwere ọnọdụ iru mmiri dị ala ma jiri nwayọ na-ekpo ọkụ.
Ọ bụrụ na anyị lelee ugwu ndị kasị ukwuu n'ụwa, nke mere na n'akụkụ lee bụ ebe enwere ọzara n'ihi ọnọdụ ndị anyị kwurula. Ebe kachasị n'ọzara n'ụwa bụ ebe enwere nrụgide nke ikuku dị elu nke na-adịgide oge niile n'afọ. Anyị ga-ahụ nke bụ nnukwu ọzara nke ụwa na mpaghara ọkụ. Ọzara Sahara, Ọzara Australia na Ọzara Atacama bụ ụfọdụ n’ime ihe ndị kachasị mkpa.
Dị na usoro ohia nke ụwa
Mana na mbara ụwa a, e nwere ụdị ọzara dị iche iche dabere na njirimara ha. Ka anyị lee ihe onye ọ bụla n’ime ha bụ:
Mid-latitude kọntinent: Ha bụ ndị nọ n'akụkụ nke ọzọ nke mkpesa ugwu ugwu Lee na-ata ahụhụ site na ọnọdụ ọkọchị na oke okpomọkụ n'ihi eziokwu ahụ na-ezo mmiri na mpaghara ugwu.
Ọzara North America: a na-ahụkarị ọzara ndị a site na oke okpomọkụ na oke mmiri.
Ala ịsọ oké osimiri: bụ ndị dị n'akụkụ ụsọ oké osimiri.
Ọzara Australia: Mpaghara a dum putara inwe ikuku ikuku di elu.
Mmiri subpolar na ugwu ugwu: ọzara ndị a pụtara maka inwe okpomọkụ dị ala na ọkwa dị ala dị ala karị n'ihi oke ọnọdụ gburugburu ebe obibi.
Ọzara Tropical na subtropical: ha nwere ndọtị pere mpe n'ihi na ihu igwe ebe okpomọkụ na-adịkarị mfe ịmepụta gburugburu ebe dị mma maka mmepe nke ụdị dị iche iche.
Usoro ohia di iche iche bu nke otutu ahihia di elu, na ebute otutu onodu gburugburu ebe obibi. Deserfọdụ ọzara, dịka ọzara Sahara, anaghị enweta mmiri ozuzo n'ime afọ niile. Nke a na eme ka ụdị ndụ dị ebe ndị a bụrụ ihe efu. N'ọnọdụ ndị ọzọ, anyị nwere ọzara nke na-enweta mmiri ozuzo, mana ha na-adịkarị oke. Nọmalị, mmiri ozuzo ndị a na-esokarị oké ifufe.
Ọzara nke nwere obere mmiri ozuzo na-enwekarị ọkwa dị elu nke ụdị dị iche iche. Ihe nlele a pụrụ ịchọta bụ ahịhịa na-eguzogide mmiri ozuzo, cacti na osisi ndị ọzọ bụ nke ndị nwere otu succulents. The cactus na-adade ke apịaji udi na-enye ohere ka ọ mụbaa mgbe ọ na-amịkọrọ mmiri n'oge mmiri ozuzo. Na mgbakwunye, mgbe mmiri na-ezo kwa afọ osisi oge ntoju ke ọzọ ume.
Banyere ụmụ anụmanụ, anụ na-akpụ akpụ na ụmụ ahụhụ egosiwo mgbanwe dị ịrịba ama na gburugburu ala. Ihe ka ọtụtụ n’ime ha na-eme ihe omume abalị iji zere okpomọkụ dị elu nke ụbọchị. E nwekwara ụfọdụ ndị nọ n'ọrụ n'oge ọnwa oyi. E nwere ụfọdụ ihe ndị e kere eke na-ahụ n’ebe dị elu na n’ebe ndị dị larịị nke na-eme ka ha kpughere obere okpomọkụ n’oge oyi. N'ebe a, anyị nwere ọzara nke Nevada na Utah nke snow na-abịakarị.
Ọnọdụ n'ọzara ụwa
Anyị ga-ahụ ihe bụ ihe kpatara oke ikuku ọkụ na ụkọ mmiri ozuzo na ebe ndị a. A na-ahụkarị gburugburu ala mmiri na mpaghara nrụgide dị elu nke na-arụ ọrụ dị ka ihu ihu igwe dị n'etiti oke ugwu na ọnọdụ ọkụ. N’ebe ndị a, ngagharị nke ikuku na - adị n’elu elu ihu n’akụkụ ọzọ nke ebe mgbago elu. Ikuku ndị ọzọ na-akwado ikuku nke na-agbadata site na ọkwa dị elu dị ka akụkụ nke mgbasa ozi Hadley zuru ezu.
Ikuku nke na-efe n'ọzara ụwa na-ekpo ọkụ ma na-akpọ nkụ. Na ala, enwere mgbanwe nke okpomọkụ na-eduga na mpaghara etiti nke nnukwu nrụgide nke a ga-eji mara na enweghị ụmụ nwoke na obere mmiri ozuzo. N'aka nke ọzọ, anyị nwere aka mmadụ nke na-akpata mpaghara ụfọdụ ebe enwere ihe ọkụkụ kpụ ọkụ n'ọnụ ma ọ bụ maka oke ọhịa iji mepụta mmetụta na-adịghị mma nke na-akpata ọzara. Ọzara bụ otu n'ime mmetụta gburugburu ebe obibi na-eme ka mbibi nke ala na-eme nri n'ụwa niile na mbelata dị ukwuu na ụdị ndụ dị iche iche.
Ihe ọzọ kpatara onodu ojoo ndia ji adi na mbara igwe. Site n'inwe mpaghara nke nrụgide dị ala na ọkwa ala nke na-eme site na okpomọkụ n'oge ehihie na ihu igwe dị ọcha, enwere ebe ndị temometa na-ebili ruo ogo nke ogo 40 na karịa.
Ala nke ala ịkpa nke ụwa na-egosi obere uwe na akwa na enweghị humus ọ bụla. O nwere udiri aja na ufodu n’ime ha ka ihu anya na ogba osisi. Ọganihu a na-enye mkpokọta ahịhịa na-anọgide n'elu ala na isi mmalite nri maka fauna. Enweghi nzacha mmiri na ihu igwe na-eme ka ha ghara ịmị mkpụrụ.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmatakwu banyere ọzara nke ụwa na njirimara ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Ọzara nke ụwa
Oke Osimiri Tasman